Ukushintshwa kwe-thermostat nge "iGazethi": ibhukwana
Kufanele kuqale ngeqiniso lokuthi i-thermostat - lena ingenye yemininingwane eminingi efakwe ohlelweni lokupholisa imoto. Ngaphezu kwalesi sigaba sokuphumula kukhona iphompo yamanzi, i-radiator, izinzwa eziningi, ama-cranes, njll. Umsebenzi obaluleke kakhulu kule nqubo ukupholisa nokufudumala injini. Uma uhlelo lungasebenzi kahle noma lungaphumeleli, lokhu kuzothinta kakhulu ukugqoka kwenjini yomshini. Ukushintshwa kwe-thermostat "iGalele" kuyodingeka ezimweni eziningi.
Izimpawu zesistimu yokupholisa
Iqala ngencazelo yokusebenza okujwayelekile kwesistimu yonke. Lapho i-thermostat isebenza ngokufanele, igcina izinga lokushisa elipholile ebangeni elingama-80 kuya ku-90 degrees Celsius. Ngaphezu kwalokho, okufanayo kubhekene nomhlangano we-fan, ovuliwe ngokuzenzakalela yi-system uma kwenzeka izinga lokushisa lokushisa kwegazi lifika kuma-92 degrees noma ngaphezulu. I-fan izosebenza kuze kube yilapho amanani okushisa e-liquid ewela kuma-degree angu-87. Kumele kuthiwa ngenkathi ebandayo, amashubhu lapho i-coolant ihamba khona ihlanganiswe nezimbozo ezikhethekile. Uma kukhona ukungasebenzi, izinga lokushisa liyokhula kakhulu. Ukuze azise umshayeli, kukhona ukukhanya okuyisixwayiso okukhanyisa uma izinga lokushisa lifinyelela kuma-degree angu-104 noma ngaphezulu. Uma lokhu kwenzeka, khona-ke yimise ngokushesha imoto, uyipholile, bese ubamba imbangela yokushisa.
Incazelo ye-thermostat kwi "Gazelle 406"
I-thermostat efakwe "iGaleli" yalolu hlobo i-valve emibili, futhi inokugcwalisa okuqinile. Indawo yalesi sigaba ukuphuma kwekhanda le-cylinder. Ngaphezu kwalokho, i-thermostat ixhunywe nge-horas ne-pump pump. Uma ubeka esikhundleni se-thermostat nge "iGazethi" kuyadingeka ukwazi. Ukuvula i-valve yalesi sigaba kwenzeka uma injini ivuselela ekushiseni kwama-78-82 degrees Celsius. Uma ukushisa kufinyelela kuma degree angu-94, i-valve ivule ngokuphelele. Uma ivaliwe, uhlelo luvaliwe futhi ukujikelezwa kudlula i-radiator. Uma i-valve esemqoka ye-thermostat ivulekile ngokugcwele, khona-ke eyengeziwe iyagcina, futhi i-liquid iyadlula nge-radiator yokupholisa.
Ukushintshwa kwe-thermostat nge "iGazethi"
Isidingo sokungena esikhundleni salesi sigaba sivela uma kunezinkinga zokushisa noma ukupholisa injini. Ukuze uthole isizathu esiqondile, kuyadingeka ukuqala injini, futhi ngesandla uzame i-radiator ephansi, lapho i-liquid igeleza khona. Ekuqaleni, kufanele kube kubanda kakhulu. Uma ekushiseni kwama-85 kuya ku-92 degrees ithubhu ayifuni ukushisa, ngakho-ke, kuyadingeka ukuthatha indawo ye-thermostat.
Okokuqala okumele ukwenze ukukhipha isikhwama esivela ku-tank yokwandisa i-radiator, bese usula yonke into. Lapho uketshezi luketsheziwe, i-plug kumele ibuyiselwe esikhundleni sayo sokuqala.
Ngemuva kwalokhu, kubalulekile ukukhulula izibopho zombili, ezitholakala ezingxenyeni ze-lid kusukela ku-thermostat.
Khona-ke ama-hoses asuswa emashubhu.
Ngemuva kwalokho, uzobona amabhutshi amathathu okudingayo ukuze uhlaziye futhi ususe ikhava ye-thermostat.
Bese ususe ipule yokulungisa. Ukuze wenze lokhu, kubalulekile ukunqoba ukumelana kwentwasahlobo, ukwehlisa isembozo phansi, bese uvula noma iyiphi indlela. Lokhu kuyadingeka ukuthi isivalo siphume ekusebenzisaneni nemifula futhi singasuswa.
Ngemuva kwalokho, i-thermostat isusiwe kulesi sikhwama.
Intengo ye-thermostat "yeGazethi" izoxhomeka ekushiseni okusebenzayo kwalesi sigaba. Ukufaka esikhundleni se-thermostat nge "iGazethi" kuyadingeka ukukhetha okufanelekile izimo zokusebenza zokusebenza. Izindleko zalesi spare ingxenye ziqala kusuka rublekhi 50. Ephakeme izinga lokushisa, kubiza kakhulu i-thermostat. Izindleko zengxenye enhle ngama-ruble angu-250-300.
Ikarus 255 ibhasi: izithombe, imininingwane yezobuchwepheshe
Motorcycle "Intuthwane" - ezishibhile futhi enokwethenjelwa
UPnP - kuyini? Indlela ukuxhuma futhi ulungiselele UPnP
Mikhail Zeldin: Biography, izithombe, kanye nempilo yakho
Kuyini kubhadalwa kwemali yemphesheni ekuvuthweni ngesikweletu?
Kungani basheshe bafika ngenyanga? Impendulo ochwepheshe
Ukuthuthukiswa into - yini lokhu? Project ukuhlela komugqa into
Indlela abantu baphile, ukuyeka ukuphuza. yotshwala wangaphambili